Ogaden News Agency (ONA) – Gudomiye ku Xigeenka JWXO oo ka qeyb galay shireynaha Jaaliyadaha Ogadeniya ee Pacific
Gudomiye ku Xigeenka JWXO oo ka qeyb galay shireynaha Jaaliyadaha Ogadeniya ee Pacific
Shirkii ka furmay 31 May 2013 wadanka Australia Magaalada Melbourn ayaa waxaa kaqeyb galay Gudomiye ku xigeenka Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadneiya Dr Maxamed Ismaciil oo halkaas kasoo jeediyay Qudbad aad uqiimi badan oo uu kaga hadlay Xaalada Shacabka Somalida Ogadeniya iyo meesha uu marayo halganka shacabka Somalida Ogadeniya. Gudoomiyaha Ayaa ku dheeraday halganka dheer ee loogu jiro sidii shacabka somalida Ogadeniya xoriyad taam ah lagu gaadhsiin lahaa.
Gudomiye ku xigeenka Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeniya oo dhawaan socdaal dheer kusoo maray Jaaliyadaha Ogadeniya ee Waqooyiga America gaar ahaan USA iyo Canada ayaa aad ugu riyaaqay waxqabadka jaaliyadaha Somalida Ogadeniya ee ku soo arkay wadamadii uu booqashada socdaalka shaqo kusoo maray. Sidoo kale waxa uu amaan iyo boggaadin usoo jeediyay Jaaliyadaha Somalida Ogadeniya ee ka howlgala 5 qaaradood. Gudomiyaha ayaa si gooni ah ugu mahad naqay Jaaliyada Ogadeniya ee Pacifiga oo ololihii gumeystuhu kusoo qaaday sanadkii hore fashilyay.
Dr Maxamed Ismaciil waxa uu ka hadlay fashiladi weyneed ee ku timid gumeysiga Ethiopia iyo sidii looga hortagay in shirar ku qabsadaan magalada melbourn. Geesinimada iyo firfircoonida jaaliyaadka Ogadeniya ayuu aad gudomiye ku xigeenku u amaanay. Waxa uuna Gudomiye ku xigeenku ku dhiiri galiyay in aan wali la xoribin sidaas awgeed in aan la isdhiganin.
Odeyaasha Somalida Ogadeniya.
Shirka ayaa sidoo kale waxaa kasoo qeyb galay odeyaasha somalida Ogadeniya ee Pacifiga. Odeyaashi waaweyna ee goobta shirka joogay waxaa kamid ahaa Ugaas Xukun oo isagu shirka uga soo safray masaafo dheer. Ugaaska ayaa kamid ah martisharafti . Jaaliyada Sydney oo masaafo dheer soogalay. Ugaas Xukun oo shirka ka hadlay ayaa kawaramay halganka Ogadeniya ee qori isdhiibka ah ee illaa muddo qarni ah lagula daggaalamayay gumeysiga.
Qudbadihi shirka ka baxay oo maqal iyo muuqaal ah dhowaan filo.